Ebe Obi Totọ Gaa Leta Na Nchọpụta Onwe Gị | Save A Train
Home > Travel Europe > Ebe Obi Totọ Gaa Leta Na Nchọpụta Onwe Gị
Na-eme atụmatụ njem naanị gị nwere ike na-agba agba ọbụna maka onye njem nwere ahụmahụ, tumadi mgbe ị na-ahọta ebe kwesiri ịga na ọrụ ndị kwesiri iji sonye ebe ahụ. Mana nke kachasị mkpa, n'ihi na ịchọrọ ime ihe kachasị mma maka nchọpụta onwe gị.
Nọ naanị gị n'okporo ụzọ na-enye gị ohere ịga ebe ọ bụla ịchọrọ n'oge ọ bụla ịchọrọ, n’enweghị ịgbaso usoro ihe onye ọzọ. Ọzọkwa, ị nwere ike ịgbagha onwe gị karịa site na ịnọ n'etiti ndị bịara abịa, nke na-eme ka obi sie gị ike, na N'ezie, eto onwe.
Nke ahụ ekwuru, ị nwere ebe ị na-aga n'uche maka njem njem onwe gị? Isiokwu a gosipụtara 7 nke kasị fun ebe ileta solo.
1. Ebe ị ga-eleta na njem njem onwe gị: Australia
Australia bụ ebe nrọ rọrọ maka ọtụtụ ndị dị iche iche n’ihi ya ohere enweghi mmiri ma ndị na-amu amu na ndị nwere ahụmahụ dị iche iche. Na ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị kwadobeghi igwu mmiri, ị ga-enwe ezigbo oge ịchọpụta ọtụtụ akụ zoro ezo mba ahụ nwere inye. Ostralia bukwara ebe obibi kachasi ikpochapu ma obu ụdị anụmanụ ndị nọ n'ihe ize ndụ, yabụ ị ga-enwe ohere dị ụkọ isoro mmekọrịta gị na fosilii gbara afọ dị nso.
Ma ọ dịghị nke kwuru eziokwu bụ isi reanwa gịnị kpatara anyị ji were Australia dịka ebe kachasị njem maka ndị njem solo. Isi ihe kpatara ya bụ udo ebighi ebi nke mba ahụ, kwesiri ntukwasi obi ọha iga, na nhọrọ ụlọ obibi dị ọnụ ala. Ga-enwe nchebe n’Australia.
Omenala ebe a bara ọgaranya na nri dị ụtọ, yabụ ị ga-enwe ọtụtụ nri na ihe metụtara ọdịbendị iji chọpụta ma mụta n'aka ndị obodo ma ọ bụrụ na ị ga-enwe oge ịhapụ. Ulo na njem ugbo ala di onu ahia ebe a, ghara ikwu otú inweta Bangkok si n'akụkụ nile nke ụwa. Ma ọ bụrụ na uche gị na-echegbu ma ọ bụ nwee nsogbu, ị nwere ike ịbanye n'ụlọ nsọ ma ọ bụ ebe ntụgharị uche ma tụgharịa uche.
Na Traingbọ oloko na Antwerp na Brussels
Amsterdam na Brussels Na A Train
Paris na Brussels Na A Train
3. Ebe ị ga-eleta na njem njem onwe gị: England
Afọ ole na ole laghachi, London bụ obodo ndị mmadụ na-agakarị na ndị njem nlegharị anya. Naanị nke ahụ kwesịrị ịgwa gị na nke a bụ ebe dị mma ịnọ mgbe ịnweghị ụlọ ọrụ. Obí Buckingham ugbu a bụ ihe kachasị mma maka ndị njem njem, mana ọ bụghị naanị ya na London. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịhụ ebe kachasị adọrọ mmasị n’ime ntakịrị oge, sonye na London n'efu na-ejegharị mgbe ị gara ileta obodo n’oge ọzọ.
Ọ na-atọ gị ụtọ ịkwọ naanị gị ruo ogologo oge? Ọtụtụ naanị njem n'anya New Zealand maka nhọrọ ịkwọ ụgbọala ọ na-eme ha. Naanị ihe ị chọrọ bụ ịgbazite onye nwe ụlọ ma ọ bụ ụgbọ ala nkịtị wee gaa ebe ụzọ ga-eburu gị. Nke a bụ a mara mma mba inyocha. Ndị obodo ahụ nabatakwara ma na-enye aka mgbe ọ bụla ịchọrọ enyemaka.
5. Ebe ị ga-eleta na njem njem onwe gị: Peru
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọhụụ ọ bụla na nleta gị pụrụ iche maka otu ebumnuche, ma Peru bụ otu n'ime mba ndị kwụpụrụ iche. Ebe a emeela ka ọtụtụ ndị mmadụ maa mma na akụ na ụba ya, na ndị mmadụ enweghị ike ịnweta ya. ya ọgaranya akụkọ ihe mere, ugwu, na omenaala omenaala, nke na-adọrọ mmasị na onye ọbịa ọ bụla. N'ihi ya, iji hụ akụ̀ niile nke mba ya, were njem nleta na Peru, ma mata obodo ahụ.
US dị iche iche, ya mere ị gaghị enwe mmetụta nke ịnọ n’enweghị ebe ọbụla ị si. Obodo ahụ dịkwa oke ala ma nwee ihe niile ịchọrọ iji bụrụ ugwu, ogige, anụ ọhịa, ma ọ bụ osimiri. Na-ekwu okwu banyere osimiri, ị ga-aga Florida oge ọzọ ị nọ na USA wee gwuo mmiri na aja ọcha. Ọzọkwa, Disney nwere ike ịbụ ebe kachasị mma maka njem onwe gị dịka ọ ga-eweghachi gị iji cheta oge ị bụ nwata, na ntakịrị ntakịrị ihe na-atọ ụtọ ma ọlị enweghị mmerụ ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ihe ị chọrọ bụ oge dị jụụ naanị gị, ị nwere ike ịnọ mgbe niile na a ezumike mgbazinye pụọ n’ebe ìgwè mmadụ nọ.
7. Ebe ị ga-eleta na njem njem onwe gị: Japan
Japan dị ọtụtụ kilomita n'ihu mba ndị ọzọ gbasara teknụzụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọkaibe n’ọdịnihu ma ọ bụ itinye ego, inyocha ohere azụmaahịa obodo a nwere ga-eme gị obi ụtọ. Obodo ahụ bụkwa ebe obibi nke ụlọ arụsị mara mma, ụlọ nkwari akụ dị elu, na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ .ụ, yana Eshia kachasị mma akụ zoro ezo. Ihe bụ ihe ọzọ, sistemụ ịkwalite njem ebe a ga-eme ka njem njem gị bụrụ ihe egwuregwu na enweghị nsogbu. Ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ egwu n'anya, I nwere ike iweta laptọọpụ gị na music-eme software ka mmụọ nsọ kụrụ gị na ikekwe na-emepụta ụfọdụ ọmarịcha ụda na-anọchi anya gị naanị njem.
Munich na Salzburg Na A Train
Iji Graz na Graz gaa Salzburg
Enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme na ịmụ na Malaysia, mana ihe kachasị adọrọ mmasị gbasara obodo Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia bụ na pasent buru ibu nke ndị bi na-asụ Bekee. Nke ahụ pụtara na ị gaghị esi ụzọ gị pụọ mgbe ị na-eme njem naanị ebe a. Mba nwere osimiri, ugwu, oghere mmiri, na ihe niile ị chọrọ iji zuru ike ma nwee obi ụtọ na ndụ n'onwe gị.
Akpa azu na njem ndi njem na-ewu ewu kwa ubochi n'ihi ngbanwe ha na-ebute. Na-eme ihe dị mma. Naanị cheta na ị ga-enwe ego zuru ezu maka ebe obibi gị, nri, na mkpa ụgbọ njem n'ihi na ị ga-atụkwasị onwe gị obi ma ọ bụrụ na ị ga-enwe ọ yourụ n'ịchọpụta onwe gị na-eme njem.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka atụmatụ gị Fun Places ileta On Your Self-Discovery Njem ụgbọ okporo ígwè.
You chọrọ Embed anyị blog post “Fun Places Iji Gaa na Onwe Gị Nchọpụta Njem” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Ffun-places-visit-self-discovery-trip%2F- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Emma na-arụ ọrụ dịka onye ndụmọdụ na ụlọ ọrụ si mba dị iche iche. Ọrụ ya chọrọ ka ọ na-eme njem mgbe niile ka ọ kpọtụrụ ndị ọrụ ibe ya, dị ka njem bụ ihe omume ntụrụndụ ya ọ na-eme ka ọrụ ya bụrụ nke zuru oke. Ọ na-enwekwa mmasị ide ihe site n'oge ruo n'oge ọtụtụ ederede metụtara njem, kamakwa ahụike na ibi ndụ. - Ị nwere ike pịa ebe a iji Kpọtụrụ Rebecca
Train Travel Austria, Train Travel Britain, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Train Travel UK, Travel Europe